चालकको सपनामा सहचालक, भन्छन्- ठूलो हुने रहर छ - Everest Talk
चालकको सपनामा सहचालक, भन्छन्- ठूलो हुने रहर छ1 min read
उनीहरूले सह-चालकलाई दुई वर्गमा राखेका छन् । स्टप र नन-स्टप । स्टप भनेको लोकल बसमा काम गर्नेहरू हुन् भने नन-स्टप भनेको लामो दूरीमा काम गर्नेहरू हुन् ।
यो चीसोमा आफैँलाई छलेर म कोटेश्वर पुगेँ । सह-चालकलाई भनेँ- “यात्राभर म तपाईँसँग गफ गर्छु भाडा दोब्बर दिन्छु |”
अहँ… कसैले मानेन, चार जनाले इग्नोर गरे । आज पनि काम हुँदैन कि जस्तो लाग्यो । ‘हार नमान केटा कोही त होला नि ! आफ्ना कुरा सुन्ने मान्छे खोजिरहेको,’ मलाई मनले यसै भन्यो ।
महानगर यातायात कुनै दुलही लिन जाने समयको बेहुलाझैँ चिटिक्क परेर आयो । सह-चालकले मेरो प्रस्ताव सहजै स्वीकार गरेको देख्दा लाग्यो, उसलाई कसैले केही नसोधेको धेरै भैसकेको छ । किनकि मैले उसलाई म गाडी चड्नुको रहस्य प्रस्तावमै मिसाएर भनेको थिएँ, जसरी कुनै होटलमा बासी खानालाई साझीमा मिसाइन्छ । चुपचाप त्यसरी नै ।
“चीसो छ है ?”
– धेरै नै
कहाँ बस्नुहुन्छ ?
गाडीमा काम कहिलेबाट गर्न सुरु भयो ?
– आठ वर्ष भयो
चालकको पछाडि रहेको स्पीकरबाट आवाज आयो– ‘अहिले हामी तिनकुने आयपुग्यौँ । कृपया, बस पूर्ण रूपमा नरोकिएसम्म झर्ने तथा चड्ने काम नगर्दिनुहोला । धन्यवाद !
नयाँ आगन्तुकलाई यो सेवाले धेरै नै सहयोग गरेको उनै सह-चालक बताउँछन् ।
– तस्बिर: आशिष मिश्र
‘कति पढ्नुभएको छ ?’ भन्ने प्रश्नमा उनी जवाफलाई साथमै रोक्छन्, चिच्याउछन्- “एयरपोर्ट कोही छ ? …. गौशाला, चावेल… चावेल, स्वयम्भू कलकीं ।”
उनको यो आवाज जागिर खाउञ्जेलको लागि दिनचर्या नै हो । उनले महानगर यातायातमा सह-चालकको जिम्मवारी त्यागेको दिन, यो रटानलाई फुक्नु पर्दैन ।
उनी र म एकै ढोकामा छौँ । म उनीसँग कुरा गर्न सजिलो होस् भनेर ढोकामा थिएँ । चालक मलाई घरि-घरि पछाडि जाने आदेश दिन्थे । विद्यालयमा गृहकार्य गरेर ल्याउनु भन्ने शिक्षकको आदेश हुँदा बहानाको खात लगाउन सक्ने म, घरमा आमाले ‘पानी जोड्न जा’ भनेर पठाउँदा फुटबल ग्राउण्डमा भेटिने म, चालकको आदेशलाई चीसो हावासँगै मुस्कानमा उडाइदिन्थेँ ।
मैले मुस्कानमा आफूलाई बेच्न सिकेको छु ।
चालकले गाडी कुदाउनु उसको जागिर हो, सह-चालकले मान्छेहरूलाई आफ्नो गाडीमा बोलाउनु उसको जागिर हो । र, त्यस समय मैले सह-चालकसँग कुरा गर्नु मेरो जागिर हो ।
म ढोकामा उभिएको देख्दा चालकलाई लागेको थियो, मैले अफ्ठ्यारो बनाइरहेको छु । उसलाई पनि मान्छे धेर हालेर कमाउनु थियो, र मलाई पनि कमाउनु थियो । सह-चालकले कमाइसकेको थियो मेरो गोजीको केही हिस्सा, त्यसैले ऊ मेरो पक्षमा थियो । मलाई डर थिएन ।
पढाइ किन छाड्नुभयो ?
– सकिएन भनौँ कि मन लागेन भनौँ । गाउँकै नि.मा.वि.सम्म पढेँ । मा.वि जान मन लागेन र सहर छिरेँ ।
काठमाडौँ आएर सुरुमा के गर्नुभयो ?
– सुरुमा आएर त एम.सी …
मैले उसको कोड भाषा बुझेको थिएँ । तापनि सोधेँ, एम.सी भनेको ?
उसले जर्दाले रङ्गाएको दाँतलाई दुई ओठले छोप्न खोज्दै भन्यो- मस्काउने चम्काउने ।
गौशाला झर्ने कोही छ ?
पछाडिबाट दुई युवती आए । यो बेलाचाहिँ अघि चालकले ठीकै भन्या थियो कि क्या हो जस्तो नलागेको पनि होइन ।
महानगर प्रहरीले सिटी फुक्यो । चालकले एक अपशब्दसहित महानगर प्रहरीको आज्ञा शिरोपर गरेर बसको गति ह्वात्तै बढायो । म झस्किएँ ।
त्यो समय म र सह-चालक साथी थियौँ । स्वार्थ अनेक थिए हाम्रा, तर देखिनको लागि हामी साथीझैँ थियौँ । पछि हेर्ला नि भन्दै बा-आमा आज पनि छिमेकीसँग कुरा गर्नुहुन्छ । सायद सबैभन्दा मीठो स्वार्थ बा-आमाको त यही छ ।
रिसाउनुहन्न भने एउटा कुरा सोध्छु ।
हेहे, के रिसाउनु र ! भन्नुस् न
तपाईँहरू छाडा धेरै किन बोल्नुहुन्छ ?
तपाईँ कोटेश्वरबाट मसँगै हुनुहुन्छ । मैले कतै छाडा बोले र ?”
होइन, मेरो मतलव यातायातमा छाडा शब्द धेरै प्रयोग हुन्छ । त्यसैले ।
सबैले बोल्छन् भन्ने छैन।
मलाई सह-चालकको कुरा ठीक लाग्यो । मान्छे आफ्नो रिस कसरी घटाउने भन्नेमा नै जान्छ । कसैले यस्ता शब्द प्रयोग गरेर आफ्नो रिसलाई आफ्नो काबुमा राखेका हुन्छन् ।
‘हामी अहिले धुम्बाराही आइपुग्यौँ । कृपया ढोकामा नउभिदिनुहोला । धन्यवाद !!!’
बिहान कतिबजे उठ्नुहुन्छ ?
त्यसपछि के गर्नुहुन्छ ?
साइकल किनेको छु । त्यसमा बस भएसम्म आउँछु । साइकल ग्यारेजमै राख्छु र बस धुन्छु । दाइ (चालक ) र म चिया-अण्डा खान्छौँ, अनि त काममा ।
दिनमा कति पटक घुम्नुहुन्छ रिङरोड ?
जाम हेरेर भर पर्छ, त्यही चार-पाँच नभए तीन ठीक्क हुन्छ ।
तलब कति लिनुहुन्छ ?
ऊ मुस्कुराउँछ मात्र । मलाई लाग्यो, भन्न खोजेन । म यसैमा अल्झिनु पनि त थिएन । सोधेँ,
योभन्दा पहिलो पनि गाडीमा नै काम गर्नुभयो ?
रामेछापको माइक्रोमा थिएँ ।”
किन छाड्नुभयो ?
मलाई गाडी सिक्न मन थियो । डाइभरले माइक्रो छुनै नदिने । रिसले छाडेँ ।
अहिले दिनुहुन्छ ?
ब्याक गर्न आउँदैन, अरू सिकिसकेँ ।
भनेपछि तपाईँ पनि चालक नै बन्ने ?
ठूलो हुने रहर जसलाई लाग्छ नि !
रक्सी पिउनुहुन्छ ?
बेलुका मात्र, थाकिन्छ सारै क्या ।
गाडीमा काम गर्नेले दिनहुँ मासु भात खान पाउँछन् रे, हो ?
हाहाहाहा हो, मचाहिँ खान्छु, अरू सबैले त्यसो नगर्लान् ।
स्टप सह-चालक तल्लो दर्जाका सह-चालक हुन् भने नन-स्टप सह-चालक माथ्लो स्तरका । नन-स्टप सह-चालकको भत्ता र तलब आफ्नै हुन्छ । मिले चौका मार्न मिल्छ । तर यता स्टप सह-चालकलाई भने कि त तलब मात्रै दिएको हुन्छ कि त दिनको भत्ता । स्टप सह-चालकले चौका मार्न पनि अलि अफ्ठ्यारो हुन्छ । त्यसै त खुजुराको कारोकार हुन्छ, ठूला नोट हत्तपत्त हुन्न, भए एक-दुई हजार हो, त्यसमा चौका मार्न सजिलो छैन |
“त्यही गुड्खा खाने चाहिँ निकालिन्छ ।” मुस्कुराउँदै सुनाउँछन् उनी ।
ट्राफिकले कत्तिको दुःख दिन्छ ?
केही इमान्दार छन्, कोही के छन् । नियममा नै हुँदा पनि कहिलेकाहीँ दुःख दिन्छन् । त्यो समयमा चाहिँ धेरै नै दुःख लाग्छ ।
अब चालक कहिले बन्नुहुन्छ ?
अर्को वर्ष लाइसेन्स निकाल्छु ।
(मुस्कुराउँदै) छैन नि ।
बसले कलंकीलाई छोयो | कतै घुम्न हिँडेकाहरू हुँदाहुन् सायद, महानगर यातायात खचाखच भयो । उसको मुहार उज्यालो भयो ।
म ढोकामै बसेँ । सबैलाई पछाडि-पछाडि भन्दै गर्दा एकछिनमा उसले फुर्सद निकालेर सोध्यो, “तपाईँ त पत्रकार हो नि ! तपाइँलाई थाहा होला, साँच्चै त्यो सुन अहिले कहाँ छ ?”
म हाँसेँ मात्र, मलाई झन के थाहा ।
उसलाई सोधेँ, राजनीति कत्तिको थाहा छ ?
भोट हाल्नु भा’छ ?
अहिले खाना कहाँ खाने ?
अब बसपार्कमा ।
प्यासेन्जरले पर्खन्छन् त ?
होइन नि, बसर्पाकसम्मको मात्र हाल्ने हो प्यासेन्जर |
कमाएको पैसा घर पठाउनुहुन्छ ?
घरकै लागि त गरेको, पठाउनै पर्यो ।
म झर्ने ठाउँ नजिक आउँदैछ । ऊ मेरो कति चाँडै हितैसी बन्यो, म सोचिरहेको छु ।
हामीले देख्ने वा भेट्ने सह-चालक सबै मिजासिला हुन्नन् थाहा छ, तर यी भेटिएका भाइ जत्तिकै मिजासिला बनिदिए यात्रा रमाइलो नै हुन्छ । कोटेश्वरबाट कोटेश्वरसम्म मैले यात्रा गर्दा उनी मसँग नझर्केका पनि होइनन् । तर, उत्तरको खोजीमा म थिएँ ।
बालकुमारी आएपछि सोधेँ, तपाइँको नामचाहिँ ?
उसले कसरी लियो थाहा छैन, तर मजाले नै हाँस्यो र भन्यो- दिनेश तामाङ |
अनि घर ?
म काटेश्वर झरेँ, झरेपछि आफ्नो भिजिटिङ कार्ड दिएँ ।
“म दाइलाई फोन गर्छु है ।” ऊ पुन: ‘एयरपोर्ट, गौशाला’ भन्न थाल्यो ।
उसले कुनैदिन फोन गर्ला र भन्ला, “दाइ, चिया पिऊँ ।” म यही दिनको प्रतिक्षामा छु ।
तस्बिर: आशिष मिश्र
Tags: driverमहानगर यातायातसह-चालक